Nagarik Frontline – Page3– Nagarik Network
Tag: Nagarik Frontline
नेपाली प्रयोगशालामा विषादीको परीक्षण विश्वसनीय छैन । नेपाल केमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष, निरञ्जन पराजुली नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
सत्तापक्षकै नेता हुनुहुन्छ तर प्रतिपक्षी जस्तो किन? एकता पछि नेकपामा भद्रोगोल देखियो नि! नेकपाका नेता भिम रावल
अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ ? सरकारका कामलाई प्रतिपक्षको नजरबाट कसरी हेर्दैछ कांग्रेस ? नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
किन हुँदैछ गुठि विधेयकको विरोध? यस विषयमा कुराकानी गर्दै पुरातत्वप्रेमी, गणपतिलाल श्रेष्ठ नागरिक फ्रन्टलाइमा ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गा सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन सकिन्छ ? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, पद्मा कुमारी अर्याल नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
सरकारले आज ल्याएको बजेटले तपाईका कति समस्या सम्वोधन गरे जस्तो लाग्छ? के सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने देख्नुहुन्छ ? पूर्व अर्थ सचिव: रामेश्वोर खनाल, पूर्व गभर्नर: दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. बिमला राई पौडेल सँगको बजेट विशेष फ्रन्ट लाइन सुवास घिमिरेको साथमा।
नेपालकै प्रेस काउन्सिल पनि कुनै समय ट्रयाक रहेको ठानिन्थ्यो। कहाँ चुक्यो प्रेस काउन्सिल? अनि किन नयाँ मिडिया काउन्सिल गठन गर्न पर्यो? प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध किन? नयाँ कानुनले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको हो र? प्राध्यापक एवं सञ्चारविद् पी खरेल र प्रेस कानुनविद् काशीराज दाहाल नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
कम्युनिष्ट नेता बिहानदेखि रातिसम्म दलाल मात्रै भेट्छन् किन? मार्क्सवादी चिन्तक एवं सत्तारुढ नेकपा स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसाल नागरिक फ्रन्टलाइनमा।
कम्युनिष्ट पार्टी नाम राखेका दलहरु सत्तामा बारम्बार पुगेका छन्। तर पनि उनीहरुले वकालत गर्ने सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि अपेक्षित काम भएका छैनन्। कम्युनिष्टहरु बिलासी बन्दै गएका छन्। नागरिकता वितरण प्रक्रिया र संघीय संरचनाको सन्दर्भमा सँधै विरोध गर्दै आएका सादगी नेता एवं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नागरिक फ्रन्टलाइमा।
लोकतन्त्रका सम्वाहक राजनीतिक दल र संरचना किन कमजोर भइरहेछन्? राजनीतिक दलहरु नै व्यवस्थित नहुँदा समृद्धि सम्भव छ? राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा, नागरिक फ्रन्टलाइन।
भागवण्डा र कोटा प्रणालीको आडमा गुणस्तरलाई लत्याउँदै जाँदा नेपालको सार्वजनिक निकायको साख खस्किँदो छ। कसरी जोगाउने न्यायालयको साख? यहि विषयमा नागरिक फ्रन्टलाइनमा कुराकारनी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापा।